Soo dejisan Adobe Acrobat Reader 20.6.1.14251 – Android – Vessoft
AndroidXafiiskaPDFAdobe Acrobat Reader
Bogga rasmiga ah: Adobe Acrobat Reader
Adobe Acrobat Reader – codsi si aad u aragto dukumiintiga oo qaab PDF ah. Softiweerku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad furto feylasha PDF ee xusuusta aaladda, kaydinta daruuraha iyo ilo kale. Adobe Acrobat Reader waxay awood u siineysaa inay ku darto faallooyinka dukumiintiyada qaaska ah, oo ay hoosta ka xariiqdo ama ku muujiso qoraalka midabbo kala duwan kuna lifaaqan qoraalada, saxiixa iyo qoraalkaaga. Softiweerku wuxuu ku dari karaa boggaga feylasha calaamadaha waxna kuusoo bandhigi karaa isbedelada lagu sameeyay dukumintiga jira. Adobe Acrobat Reader waxay dukumiintiyada u rogeysaa qaababka xafiiska caanka ah sida Word iyo Excel. Softiweerku wuxuu la fal galayaa kaydkiisa daruuriga ah iyo Dropbox halkaasoo aad ku abuuri karto akoonnada isla markaana aad ku dhex mari karto dalabka. Adobe Acrobat Reader waxay kaloo kuu ogolaaneysaa inaad la wadaagto feylasha asxaabta una dirto dukumiintiyada si aad u daabacdo.
Awooda furitaanka feylasha PDF ee ilo kala duwan
Ku dar faallooyinka dukumiintiga
Dhexgalka kaydinta daruurigeeda iyo Dropbox
U dir dukumentiyada si ay u daabacaan
Soo dejisan Adobe Acrobat Reader
Adobe AIR – barnaamij softiweer ah oo ku kordhinaya shaqeynta aaladda. Software-ka ayaa awood u siinaya inuu abuuro ama maamulo codsiyada lagu soo saaray luqadaha barnaamijyada kala duwan.
Faallo ku saabsan Adobe Acrobat Reader
Adobe Acrobat Reader Xirfadaha la xiriira
Nadiif Master ah – maamule caan ah oo ka mid ah xakameynta faylka iyo kobcinta nidaamka. Software-ka wuxuu awood u siinayaa inuu falanqeeyo xaaladda aaladda oo nadiifiyo nidaamka shaqooyinka wax soo saar badan leh.